थोरैलाई दर्शकको धेरै छ साथ , अधिकांसको कन्तबिजोग ( सिनेमा बजारको विश्लेषण )
गफगाफ / यसपालीको दशैमा दिपक दिपाको चलचित्र छक्का पञ्जा ३ चल्ने कुरा पोहोर नै पक्का भएको हो । केहि हप्ता अघि सिनेमाको पहिलो गित सार्वजनिक भएसँगै सिनेमाको व्यापारलाई लिएर चलचित्र बजारमा टिका टिप्पणी शुरु भैसकेका छन् । छक्का पञ्जा ३ को गित थोरै दिनमा करोड क्लबमा पुग्ने निश्चि जस्तै छ । यसले के पनि देखाउँछ भने दर्शक छक्का पञ्जा ३ हेर्न आतुर छन् । उनै दिपक र दिपा सहितको टिमले निमार्ण गरेको छक्का पञ्जा २ र छक्का पञ्जा ले यस अघि नै नेपाली सिने बजारमा व्यवसायीक रेकर्ड आफ्नो पोल्टामा पारेको छ । झण्डै १६ करोड भन्दा माथीको व्यापार नेपाली चलचित्र बजारले उनीहरुबाटै देखेको हो । रमाईलो कुरा के हो भने जब जब छक्का पञ्जा रिसिज नेपाली सिनेमा बजारमा आउन थाल्छ , अनि ७२ सालको भुकम्प सम्झाउने गरि नेपाली चलचित्र बजारमा तरंग सुरु हुन्छ । हलचल पैदा हुन्छ । उनीहरुको चलचित्र सिनेमा घरबाट नउत्रिदा सम्म पराकम्पन् हरु आइरहन्छन् । सिने बजारको बिवाद र बहसले आकाश छुन थाल्छ ।
त्यति मात्रै हैन हामी छिमेकले थिचेको बिर्सन्छौं । आफैं आफ्नाकै कुरा काट्छौं । सके सम्म आफ्नालाई नै दुःख दिन दिन रात खटिन्छौं । म अरुको जस्तो हैन फरक तर राम्रो सिनेमा बनाउछु भन्ने सोच भन्दा अर्काको कसरी बिगार्ने त्यसमा बढी समय लगाउँछौं । अनि कहाँ बन्छ त व्यवसायीक सिनेमा । अनि कहिले उँभो लाग्ने सिनेमा उद्योग ? अनि कहिले बन्ने सफल सिनेमा । हामीले सिनेमा बनाएको थालेको झण्डै ५ दशक भन्दा बढी भयो । लामो ईतिहासमा पनि हामीसँग कमजोर अनुभव छ ।
दर्शक छन् । व्यवसायले लोभ लाग्दो नाफा कमाउन सक्छ भन्ने उदाहरण ताजै हुँदा पनि हामी न कथामा जोड दिन सकेका छौं । न अभिनयलाई निर्खान सकेका छौं । चलचित्र निमार्णको व्यवसायलाई बुझ्न सकेका छौं । बाटो बिराएको बटुवा जसरी हिडेर सिनेमा उद्योग कहाँ पुग्ने कसैलाई थाहा छैन । यहि सालमा रिलिज भएका सिनेमाहरुको नालीबेली कोट्याउने हो भने, सिनेमा उद्योग अमेरिका ताक्ने कलाकारको लागि मैदान मात्रै त हैन भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । १६ करोडका दर्शक पछिल्लो ४ महिनामा कहाँ गएँ ? हाम्रो बिष्लेशण यसैमा केन्द्रित हो ।
अब २०७५ साल पश्चात रिलिज भएका चलचित्रहरुलाई फर्किएर हेरौ :
२०७५ साल सुरु भएको ४ महिना पुरा भइसकेको छ । तर हाल सम्म कुनै पनि चलचित्रले सुखद व्यापार गर्न सकेको छैन । यसलाइ हेर्दा नेपाली चलचित्रको व्यापार निकै कमजोर देखिएको छ । केहि नाम चलेका कलाकारहरु देखि नँया अनुहारका कलाकारहरुले अभिनय गरेका चलचित्रहरु यो बिचमा रिलिज भए । नयाँ वर्ष सगै दयनिय अवस्था बाट सुरु भएको चलचित्र बजार साउनको समाप्ती सम्ममा पनि जस्ताको त्यस्तै देखियो । २०७५ साल सुरु भए देखि आल सम्ममा ठुला तथा साना व्यानरका गरि करिव ३ दर्जन चलचित्र रिलिज भए । तर कोहलपुर एक्सप्रेस,बोबी, कायरा लगायतका केहि चलचित्रहरु ’ले देश र विदेशबाट लगानी मात्र उठाए पनि रिलिज भएका अन्य सबै चलचित्रहरु बक्स अफिसमा असफल सावित भए । हरेक हप्ता ३ देखि ४ वटा सम्म रिलिज भएका चलचित्र कुनैले पनि सफल व्यापार गर्न नसक्नुले चलचित्र क्षेत्रको अवस्था निकै दयनिय भएको चित्रित गरेको छ । चलचित्रको काहाली लाग्दो बजारमा भाद्र ८ गते बाट यस वर्षकै प्रतिक्षीत चलचित्र नाई नभन्नु ल ५ प्रदर्शनमा अएको छ ।
चलचित्र बजारमा भएको काहाली लाग्दो व्यापारलाई अब नाइ नभन्नु ल ५ ले राहात दिन सक्ला त ? त्यो भने केहि दिनको प्रदर्शन प्रश्चात थाहा हुने छ । यस अघिका ४ सिक्वेलहरुले उत्साहा जनक प्रदर्शन गरेका काराण पनि यस चलचित्रले २०७५ सालको पहिलो सफल चलचित्रका रुपमा आफुलाई स्थापित गर्न सक्छ । पछिल्लो समयका निर्माताहरुमा धेरै लगानी गरेर निर्माण गरकोे चलचित्र चल्छ भन्ने गलत धारणाको विकास हुदै गएको देखिन्छ । एउटा चलचित्र निर्माण गर्नका निम्ति सबै भन्दा पाहिला निर्माता तयार हुन आवस्यक हुन्छ । उसले चलचित्र सुरु भए देखि अन्त्य सम्मको अवस्थाको कल्पना गर्न आवस्यक हुन्छ । चलचित्रमा समावेश कलाकारलाई पारिश्रमिक दिने देखि चलचित्रमा हुने सम्पुर्ण खर्च निर्माताले तय गर्ने गर्छ ।
चलचित्रको मेरुदण्ड कथा
चलचित्रलाई दर्सकको मन मस्तिष्कमा छाप छोड्नका निम्ति त्यस चलचित्रको कथाले महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्छ । कथालाई चलचित्रको मेरुदण्डकै रुपमा लिइन्छ । कथा उत्कृष्ट हुन सकेन भने अन्य क्षेत्रको लगानीले मात्र चलचित्रलाई सफल बनाउन सक्दैन । कथा उत्कृष्ट हुन सकेन भने स्टार कलाकारलाई खेलाएर मात्र चलचित्र सफल हुन सक्दैन । पछिल्लो समय रिलिज भएका धेरै चलचित्रहरुले कथालाई सामान्य रुपमा लिएकै कारण असफलताको ट्याग भिर्न बाध्य भएका छन् । पहिले नै चलचित्रको रिलिज डेट तय गरेर कथामा काम गर्नेे निर्माता तथा निर्देशकहरु पनि धेरै छन् यस क्षेत्रमा । उनिहरुको यहि हर्कतबाट त्यस चलचित्रले व्यापार कस्तो गर्न सक्छ भनेर कल्पना गर्न सकिन्छ । कथा पश्चात चलचित्रलाई बुट्टा भर्ने कार्यमा महत्वपुर्ण भुमिका त्यसको पटकथाको हुन्छ । तर चलचित्रका निर्माता हरुले पटकथालाई सामान्य रुपमा लिने गरेका कारण पनि चलचित्र क्षेत्र प्रभावित बन्ने गरेको छ । करोडौको लगानी गरेर चलचित्र निर्माणमा लगानी गर्न अघि सर्ने निर्माताहरु पटकथामा चिप्लिएको पत्तै पाउदैनन् ।
चलचित्रमा निर्देशकको भुमिका
पटकथा पश्चात चलचित्रको महत्वपुर्ण जिम्मेवारी निर्देशकको हातमा हुन्छ । कथा अनुसारको पात्र छनोट गर्ने, कथाले मागे अनुरुपको लोकेश नचयन गर्ने, चलचित्र युनिटको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा निर्देशकको भुमिका अहम हुन्छ । कलाकारहरु बाट कथाले मागेको कुरालाई अभिनयमा उतार्न सक्ने कला निर्देशकमा हुन आवस्यक हुन्छ । त्यति मात्र नभएर चलचित्रको प्रचार प्रसारमा समेत निर्देशकको भुमिका हुन्छ । चलचित्रको सुरुवात देखि अन्त्य सम्ममा सबै भन्दा महत्वपुर्ण भुमिका निर्देशकको रहने गर्छ । निर्देशक सगै चलचित्र निर्माणमा कुनै कमि हुन नदिनका निम्ति निर्देशकलाई सहयोगी टिमको आवस्यकता पर्छ । त्यस पछिको अर्को महत्वपुर्ण पक्ष कलाकार चयन पनि हो । चलचित्रलाई दर्शकको मस्तिष्कमा पुर्याउन कलाकारको चयनले महत्वपुर्ण भुमिका राख्दछ । कथाले मागे अनुसार अभिनयमा उतार्न कलाकारको भुमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । जसले गर्दा चलचित्र निर्माण अघि कथाले माग गरे अनुसारको पात्र चयनमा ध्यान पुर्याउन आवस्यक हुन्छ । चलचित्रमा कथाको जति महत्व हुन्छ , त्यसमा अभिनय गर्ने कलाकारको पनि उत्तिकै महत्व हुन्छ ।
चलचित्रमा समावेश गीत संगीतको महत्व
त्यस पश्चात चलचित्रको अर्को अत्यन्तै महत्वपुर्ण अंग त्यसमा समावेश गित संगीत हो । चलचित्रमा समावेश गित संगीतले चलचित्र चल्ने नचल्ने भविस्यवाणी गरिदिन सक्छन्,। चलचित्रमा समावेश गीत संगीतकै कारण चलेका चलचित्रहरु पनि प्रसस्तै छन् । पहिले रिलिज भएका केहि चलचित्रहरुले यसको उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेका छन् । चलचित्रलाई सुन्दर बनाउन क्यामराको भुमिकाले पनि उत्तिकै महत्व राख्छ । पछिल्लो समय कस्तो क्यामरा प्रयोग भएको छ, दृश्य कुन कोणबाट खिचिएको छ ? लगायतका कुराहरुले हालका चलचित्रमा निकै महत्व राख्छ । त्यस सँगै चलचित्रका निम्ति आवस्यक प्राबिधिक तथा प्राबिधिक सामाग्रीहरुको भुमिका अहम हुन्छ । पहिलेका तुलनामा हाल निर्माण भएका नेपाली चलचित्रहरुमा प्राविधिक पक्ष भने सुधार हुँदै गएको दखिन्छ । कतिपय नेपाली चलचित्र निर्माताहरुले लागत कम गर्नका निम्ति सुटिङ अवधी छोट्याउने गर्छन् । तर पर्याप्त समय दिएर गरेका चलचित्रहरुले नै दर्शकहरुको सकारात्पक टिप्पणी पाउने गरेका छन् । एउटा सामान्य कथामा निर्माण हुन लागेको चलचित्रलाई कम्तिमा ३० देखि ३५ दिन लाग्छ ।
चलचित्रको सुटिङको सम्पुर्ण कार्य सम्पन्न भए पश्चात इडिटिङ,मिक्सिङ गरि सम्पादन् गरिन्छ । चलचित्रलाई दर्शक माझ पुर्याउन वितरकको महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ । सम्पुर्ण कार्य सम्पन्न भइसके पश्चात रिलिज डेट पक्का गरिन्छ । नेपाली परिवेशमा चलचित्र रिलजको मितिले पनि निकै महत्व राख्छ । विशेष त चलचित्र निर्माता तथा निर्देशकहरुले कुनै चाडवाड अथवा सार्वजनिक बिदाको समयमा चलचित्र रिलिज गर्ने चाहाना राख्छन् । तर चलचित्र उत्कृष्ट बनाउन सके जुनसुकै समयमा पनि चलचित्र चल्न सक्छ भन्ने उदाहरणहरु प्रशस्तै छन् । सम्पुर्ण काम सम्पन्न भइसके पश्चात चलचित्रको टिम विज्ञापनका निम्ति देश दौडाहामा निस्कन्छ । चलचित्रलाई दर्शकमाझ पुर्याउन विज्ञापनको अत्यन्तै महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ । चलचित्र सफल हुनका निम्ति यस्ता सबै कुराहरुको समयोजन हुन आवस्यक छ ।
सिने बजारका उदाहरणिय चलचित्र
कतिपय चलचित्र कर्मीहरु चलचित्र क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरालाई जुवा सँग तुलना गर्ने गर्छन । तर यो गलत छ । किन भने यसै क्षेत्रमा धेरै उदाहरणहरु छन् जो एक पछि अर्को सफल चलचित्र निर्माण गरिरहेका छन् उदाहरणका निम्ति दिपक दिपाको छक्का पञ्जा, विकास राज आचार्यको नाइ नभन्नु ल,सन्तोष सेनको पे्रम गीत लगायतलाई लिन सकिन्छ ।
चलचित्र असफल हुनुको मुख्य कारण
यसै क्षेत्रमा कुनै व्यानर ले निर्माण गरेका चलचित्र एक पछि अर्को सुपरहिट भइरहेका छन् भने कुनै व्यानरले पानी भन्न पाएका छैनन् । यसको मुख्य कारण भनेको अध्ययन बिनै चलचित्र निर्माण गर्नु पनि हो । पछिल्लो समय निर्माण हुने गरेका धेरै जसो चलचित्र हरु अध्ययन बिनै बन्ने गरेका छन् । चलचित्र क्षेत्रमा पैशा खन्याउन सके सफल भइन्छ भन्ने गलत धारणको विकास हुदै गइरहेको छ । चलचित्र क्षेत्रमा लगानी गरेर घरबार डुवाएका उदाहरण हरु प्रसस्तै भेटिन्छन् हाल चलचित्र नगरीमा । समय मै सचेत नभइ निर्माण गरेको चलचित्र बाट अन्त्यमा पछुताउनु बहेक अरु उपाय हुन्न । त्यसैले चलचित्र निर्माण गर्नु पहिले यस क्षेत्रको राम्रो संग अध्ययन गरेर पो चलचित्र निर्माण कार्य अघि बढाउने कि ?